WARBIXIN: Doorashada Kismaayo, waxay saameyn u leedahay DF Soomaaliya.
KISMAAYO(P-TIMES) – Dawladda Faderaalka ee Soomaaliya ayaa si weyn ugu fooganeyd bilihii lasoo dhaafay faragalinta dawlad gobaleedyada xubnaha ka ah, gaar ahaana doorashooyinka, waxayna horey saameyn ugu yeelatay doorashooyinkii Puntland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle, Galmudug iyo Jubbaland oo ugu dambeysay taas oo ay ku doonaysay in siyaasiin taageersan ay hoggaanka u qabtaan.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa dhaqaale badan iyo dadaal xoog badan galisay sidii ay ku guuleysan lahaayeen musharaxiintooda, waxaana qaar kamid ah doorashooyinkaas ka rabshado ay dad ku dhinteen, gaar ahaana doorashadii Koonfur Galbeed.
Ujeedada ugu weyn ee ay dawladda Soomaaliya u sameysay faragalintan ayaa ah in doorashada guud ee 2020-ka, xildhibaanada deegaanadaas kasoo baxaya ay noqdaan kuwa taabacsan kooxda Nabad iyo Nolol, si ay mar kale ugu guuleystaan doorashada Madaxweyne-nimada, balse ilaa hadda meelaha qaarkood guuldarro siyaasadeed ayaa ka dhacday.
Jubbaland ayaa maalmihii u dambeeyey ay Xukuumadda Soomaaliya aad saameyn ugu yeelanaysay waxaana wasiiro iyo xildhibaano katirsan golayaasha dawladda ay ahaayeen kuwa u sharaxan Madaxweyne-nimada, balse caqabado badan ayay la kulmeen.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa hadda loo arkaa in aysan horumar wanaagsan ka gaarin doorashada Jubbaland sidii ay faragalin ugu sameyn lahayd, waxaana musharaxiinta ay doonaysay in ay isbedelka sameeyaan ay ahaayeen kuwa ka maqan saaxada siyaasadeed.
Tartanka magaalada Kismaayo ayaa la rumeysan yahay in uu bar bilow u yahay loolanka madaxtinimada Soomaaliya oo ay si adag ugu tartamayaan siyaasiin adag oo iska soo horjeeda, waxaana guuldaradda dawladda Faderaalka ay kala kulantaa waqtigan fagaaraha Kismaayo ay ka dhigan tahay guuldarro saameynteedu gaari doonto maalmaha doorashada oo ah sannad iyo bar ka dib.
Mucaaradka dawladda Faderaalka Soomaaliya oo laftirkoodu isku aragti aheyn ayaa ka mideysan sidii dawladda loogu qabsi lahaa in ay ka baaqsato faragalinta dawlad gobaleedyada, waxaana muuqata in dawlad gobaleedyada qaarkood ay mar horeba bilaabi doonaan ladagaalanka Xukuumadda dhexe.